Seychelles na -eji mgbasa ozi ezubere iche na -aga dijitalụ na ọkwa mgbasa ozi Italiantali
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles na -eji mgbasa ozi ezubere iche na -aga dijitalụ na ọkwa mgbasa ozi Italiantali
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ ọrụ nnọchite anya njem nlegharị anya nke Seychelles n'Ịtali yana onye mmekọ ahịa Qatar Airways amalitela mkpọsa ndị ahịa na -abanye na ngalaba abụọ dị oke mkpa ma na -eto eto maka ebe a na -aga - ezumike ezumike na njem nlegharị anya.
Seychelles nọ na ntụpọ ụzọ ọmarịcha ọnụ ụzọ agbamakwụkwọ Matrimonio.com.
Portal ahụ na -etu ọnụ ndị na -ere ahịa 700,000+, nde ndị ọrụ pụrụ iche 20 na nyocha nde 7.
Ọ bụkwa onye ndu na ọwa mgbasa ozi na -elekọta mmadụ nwere ihe karịrị nde 8,100,000 na Facebook, karịa ndị na -eso 3,950,000 na Instagram na ndị na -eso 2,000,000 na Pinterest na mbụ na Search Engine Marketing na Search Engine Optimization results.
Ndị na -achọ ịlụ di na nwunye na -achọ ịlụ di na nwunye n'oge oge agbamakwụkwọ na -esote, mgbe gọọmentị Italy buliri mmachibido iwu ememe agbamakwụkwọ na June 2021, Seychelles bụ ntụpọ nke ọmarịcha ọnụ ụzọ agbamakwụkwọ Matrimonio.com.
Onye ndu ụwa niile na-eme atụmatụ agbamakwụkwọ n'ịntanetị yana oke 96% nke alụmdi na nwunye 195,000 a na-eme kwa afọ na Italy ma na-arụ ọrụ na ahịa iri na abụọ n'ụwa niile, ọnụ ụzọ agbamakwụkwọ a bụ ntụnye kachasị mkpa maka ndị lụrụ di na nwunye na-ahazi agbamakwụkwọ ha ma gosipụta nyocha niile metụtara agbamakwụkwọ. dị ka uwe mwụda, ebe egwuregwu, okooko osisi na ebe ezumike. Ebumnuche ha gụnyere inyere ndị lụrụ di na nwunye aka ịhazi agbamakwụkwọ ha site na ijikọ ha na ndị na -eweta ngwaahịa kachasị na mpaghara ha.
Portal ahụ na -etu ọnụ ndị na -ere ahịa 700,000+, nde ndị ọrụ pụrụ iche 20 na nyocha nde 7. Ọ bụkwa onye ndu na ọwa mgbasa ozi na -elekọta mmadụ nwere ihe karịrị nde 8,100,000 na Facebook, karịa ndị na -eso 3,950,000 na Instagram na ndị na -eso 2,000,000 na Pinterest na mbụ na Search Engine Marketing na Search Engine Optimization results.
Ọrụ a, n'ịzụ ahịa na Qatar Airways, gụnyere mkpọsa ime ihe abụọ, site na desktọpụ na ngosipụta mkpanaka, mgbasa ozi na ịtụ anya mgbasa ozi mmekọrịta, iji kpalie di na nwunye ịhazi atụmatụ ha. Ezumike ezumike Seychelles na ngwugwu ezumike. Na -amalite site na June 2021, mkpọsa nke abụọ na -atụ anya na ịghaghachị azụ, na akwụkwọ akụkọ pụrụ iche na nchekwa data nke 190,000 ndị na -alụ nwanyị na ndị ga -abịa n'ọdịnihu.
Njem nlegharị anya Seychelles kwenyesiri ike na mkpọsa ahụ ga-akpali akụkụ nke ezumike ezumike, nke nọ na-ehi ụra n'ihi ọrịa COVID-19 kemgbe afọ gara aga na Seychelles bụ ụzọ mgbapụ zuru oke maka ndị di na nwunye na-achọ nchekwa, mmekọrịta chiri anya na paradaịs ebe okpomọkụ.
Ọzọkwa, njem nlegharị anya nke Seychelles na -abanye na ngalaba niche ọzọ dị oke mkpa nke na -eto n'ike n'ike - ecotourism.
Ebumnuche nke a bụ iji kpalie onye njem ọhụrụ ahụ, onye na -enwe mmetụta maka nsogbu na -adịgide adịgide yana ịchọ ebe dị mma dị ka Seychelles, ya na ihe ịtụnanya ya na nlebara anya na nchekwa, Seychelles ga -apụta n'ọnwa ndị na -abịanụ na ọdịdị Italiantali a ma ama. La Rivista della Natura na ọwa ozi ya na ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Natura, mbipụta nkeji iri na ise, na-anya isi ihe dị ka ndị na-agụ 20,000, yana ọnụnọ ọnlaịnụ siri ike na webụsaịtị ya na ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ abụrụla onye ndu n'okwu okike na gburugburu ebe obibi kemgbe 1999. Amara maka onyonyo ya dị elu na ọdịnaya na-atọ ụtọ, bipụtara akụkọ ole na ole n'ime mbipụta nkeji iri na ise ọ bụla ndị isi ọkachamara bịanyere aka n'akwụkwọ maka ọdịdị na okwu gburugburu. A na -ekesakwa Rivista della Natura n'oge ọtụtụ ihe omume na ahịa ngosi. Mbipụta nke ọ bụla na-egosi njem njem ihe okike na njem gaa mba na mba ụwa na-elekwasị anya na njem na-adigide, ebe anụ ọhịa, anụmanụ na osisi.
Mbipụta nke ọ bụla nwere ntinye "AKU NA UBA" - na -ekpuchi okwu dị ka ụkpụrụ omume, ahịa, njem na -adigide - raara nye mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na gburugburu ebe obibi, ebe akụkụ ụfọdụ na -elekwasị anya na aro gbasara akparamagwa ndụ kwa ụbọchị na omume ọma maka ndị na -agụ akwụkwọ nwere ike itinye aka na chekwaa ụwa site na mmetọ, ebe ikpo okwu ya dị n'ịntanetị na -ewepụta akwụkwọ akụkọ raara onwe ya nye na ọdịnaya pụrụ iche.
Mgbasa ozi ndị ahịa gụnyere isiokwu ewepụtara na Seychelles, ibe mgbasa ozi, akwụkwọ akụkọ akwadoro na ọkọlọtọ pụrụ iche webụsaịtị nke ihe dị ka ndị ọrụ 1,712,360 na -elele kwa afọ.
Na 2019, Seychelles natara ndị ọbịa 27,289 si Italy.